“Farqi weyn ayaa u dhexeeya Real Madrid iyo Inter Milan” – Antonio Conte – Gool FM
(MIlano) 26 Nof 2020. Tababaraha Inter Milan ee Antonio Conte ayaa qirtay in kooxdiisa ay aad uga fogtahay heerka Real Madrid, kaddib ciyaartii labada koox ay xalay ku wada ciyaareen garoonka Giuseppe Meazza.
Real Madrid ayaa guul ka soo heshay 10 xiddig oo Inter Milan ah kaddib markii ay kaga soo adkaadeen 0-2, waxaana goolasha u kala dhaliyay xiddigaha Eden Hazard iyo Rodrygo.
Haddaba fursada ay Inter Milan u heysato u gudbitaanka wareega xiga 16-ka ee tartanka Champions League ayaa noqotay mid aad u adag, kaddib guuldarradii ay kala kulmeen kooxda reer Spain ee Real Madrid, xilli Nerazzurri ay GROUP B kaga jirto booska ugu dambeeya iyadoo leh labo dhibcood.
Tababaraha reer Talyaani iyo kooxda Inter Milan ee Ante Conte ayaa u sheegay shabakada “Sky Sports”, kaddib ciyaarta:
“Had iyo jeer way adag tahay in lala ciyaaro kooxaha waa weyn sida Real Madrid, marka gool lagaa dhaliyo isla markaana ciyaaryahan lagaa siiyo kaarka casaanka ah, waxay noqoneysaa wax aan macquul aheyn in laga hor yimaado.”
“Waxaan aragnay farqiga noo dhexeeya anaga iyo iyaga, laakiin guuldarradan ma ahan inay dhulka na keento, waa inaan sameyno wado aan raacno, oo waxaan u baahanahay inaan noqono kuwo gaajoon, oo aan si adag u shaqeyno, si aan u garano meesha aan joogo, isla markaana aysan wax saameyn ah nagu yeelan dhawaaqyada ka imaanaya dibadda.”
“Uma maleynayo inaan ku liidanay dhanka weerarka, sababtoo ah marwalba waxaan dhalinaa goolal badan, sidaan horay u sheegay, ciyaartu waxay ahayd mid dhib badan marka laga soo bilaabo bilowgeedii, wayna adkaatay in la soo laabto kaddib kaarkii casaanka ahaa.”